Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweChile neGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho eChile:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eChile
● I-visa yegolide eChile
● Iphasipoti yesibili evela eChile
● Ukuhlala ngokutshala imali eChile ngokutshala imali kwizakhiwo nezindlu
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eChile kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngotshalomali eChile kanye nabashintshi bezinhlelo zokuhlala izindlu eChile basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eChile kunikela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eChile, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eChile, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshalwa kwezimali eChile, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali eChile, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile , Ukuhlala unomphela ngokutshalwa kwezimali eChile, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshalwa kwezimali eChile, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eChile, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eChile, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eChile, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eChile, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eChile, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eChile, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eChile, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali eChile, ukuhlala nokuba yisakhamuzi ngokutshalwa kwezimali eChile, izinhlelo zobuzwe zezomnotho eChile, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eChile, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eChile, okwesibili ipasipoti eChile, izinhlelo zepasipoti zesibili eChile, ipasipoti yesibili ngiseChile, ipasipoti yesibili eChile, indawo yokuhlala nepasipoti yesibili eChile, ipasipoti yesibili yezokuxhumana eChile, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwemali eChile, ipasipoti yesibili yobuzwe eChile, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti eChile, izinhlelo zepasipoti yesibili eChile, i-visa yegolide eChile, ama-visa egolide eChile, izinhlelo ze-visa zegolide eChile, uhlelo lwe-visa yegolide eChile, i-visa yesibili yegolide eChile, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide eChile, ama-visa egolide amabili eChile, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eChile, indawo yokuhlala kanye ne-visa yegolide eChile, ubuzwe begolide be-visa eChile, uhlelo lwe-visa egolide eChile, izinhlelo ze-visa zegolide eChile.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali eChile ngosizo olungeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eChile Kokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali: I-USD 2,500,000
Isingeniso I-Chile kanye Nokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali
Funda kabanzi ngeChile
Okwamanje futhi okusebenzayo, iChile ikhombisa iziqongo zezintaba ezithandekayo, amachibi acwebezelayo, nempilo eningi yemvelo. Inokushushuluza okungakholeki ngesikhathi esibandayo sonyaka nezigodi eziphakeme eziphakeme entwasahlobo. Amaketanga eziqhingi namadolobha okudoba athokozisayo abolekisa ngaseningizimu, kuyilapho ububanzi bogwadule bubusa enyakatho. Imiphakathi yayo engenamadolobha inikezela ngohlaka lweFirst-World, kanti iziphathimandla zomphakathi ziyamangaza uma ziqhathaniswa nezinye ezihlanganisiwe futhi ezinzile esifundeni.
IChile inezinga eliphansi lokwehlisa isithunzi eLatin America, njengomnotho ozinze kakhulu, izinga eliphakeme lokuphila, kanye nesidingo esincane kakhulu. Ungaphuza amanzi kunoma iyiphi impompi esizweni, futhi inokulawulwa kwamanje kwefoni nezingcingo, i-Intanethi esheshayo, ne-TV yedijithali. Izitaladi ezibalulekile nezikhethwayo zizungezwe zigcinwa zisuka kwesinye isiphetho sesizwe ziye kwesinye.
Indlela yokuphila eChile incike kakhulu ekutheni ukhetha idolobha noma impilo yesizwe, umkhathi, nezinye izinto eziningi zenhlalo. Amadolobha ahlinzeka ngeminyango eminingi evulekile yokuzivocavoca nendlela yezinqumo zempilo. Uma udinga umsebenzi wasehhovisi, ngaleso sikhathi, iSantiago yindawo okufanele ube kuyo. Indlela yokuphila ehleliwe, ehlelwe ngumsebenzi imaphakathi lapha kepha ukuba sedolobheni elikhulu kunikeza iminyango eminingi evulekile yokuzivocavoca kwangemva komsebenzi, ukwenza idili, ukukhasa ezinkantini, namakilabhu. Izikhungo ze-Rec kanye namakilabhu anamachibi afinyeleleka kubantu abanamandla, benhlalakahle abangavunyelwe. Ngokunjalo kunezindawo eziningi zokuthenga kanye nama-ferias, noma izimakethe ezivulekile.
Isimo esimnene sikaSantiago siyazwakala ngokuzivocavoca umzimba okuhlukile. Kunamapaki ahlukahlukene asendaweni, ukushushuluza ezintabeni ezingaphandle kweSantiago, ukuvakashelwa kwama-winery, nezinye izivivinyo zomoya ezivulekile, isibonelo, ukuhamba, ukuhamba ngezinyawo, nangaphandle eCajon de Maipo, umhosha oseduze.
Impilo yedolobha eValparaiso noma kwenye yezindawo ezisogwini lolwandle ngasenyakatho njengeLa Serena, i-Antofagasta, ne-Iquique ngaphezu kwalokho inikela ngezigcawu zokuzivocavoca zolwandle njengokweqa iscuba, ukuntweza olwandle, ukusakazwa kwezimoto, ukudoba nokuhamba ngomkhumbi.
Impilo yesizwe ingashintsha ngokuncika kakhulu kumoya ohlala kuwo. Isigodi esigxile eChile sinomkhathi weMedithera futhi siyathandeka unyaka wonke. Indlela yokuphila lapha ibuyiselwe emuva kakhulu ngokuhamba kalula kwempilo, okuhamba kancane. Imisebenzi ayiningi kangako lapha, noma kunjalo, ngakho-ke le ndawo ingaheha kakhulu abantu asebethathe umhlalaphansi noma abantu abasebenza kude.
Isimo sezulu sihle unyaka wonke, esivumelana nenjabulo yokuzivocavoca umzimba okuningi, kufaka phakathi ukuhambahamba, ukuhamba, ukukhuphuka, ukuhamba ngezinyawo, ukukhukhuleka, i-kayaking nokudoba. Cishe impahla engama-20% yaseChile ivikelekile, futhi kunamapaki omphakathi angama-36 asabalele esizweni sonke. Amapaki amaningi ahlinzeka ngokuvuleka okungavamile kohambo, amanzi amaningi angaphansi komhlaba, amachibi nemifudlana.
Isizwe sihlala eSouthern Chile
Ukuhlala eningizimu yeChile kungahluka ngandlela thile ngenxa yomkhathi ohlukahlukene. Kwangathi kuya kuSepthemba kungaba manzi kakhulu futhi kuphole. Yiba ngangokunokwenzeka, le ndawo empeleni inethoni yokuletha etafuleni. Isifunda samachibi, ikakhulukazi, sinemibono emihle emachibini ahlanganiswe nezintaba-mlilo ezimbozwe yiqhwa. Ukudoba ngezindiza nokuhamba ngesikebhe ehlane kuyimidlalo esezingeni eliphakeme lapho.
Impilo yokuhlakulela kanye ne-rustic idlulele eningizimu, futhi lokhu kufakwa yimikhosi nemicimbi. Abantu baseningizimu baziwa ngokuthakasela futhi nokuxegisa. Baboshwe ekusebenzeni ukuze baphile hhayi baphilele ukusebenza.
Impilo yomndeni igxile kakhulu, futhi izikole zinikela ngeminyango eminingi evulekile yokuzivocavoca kwenethiwekhi, ikakhulukazi lezo ezihambisana nemicimbi yaseChile, ngokwesibonelo, iFiestas Patrias lapho idolobha ngalinye linezimoto zalo nemikhosi yalo.
Izindawo ezinkulu ezisemadolobheni eningizimu zinama-rodeos (umdlalo womphakathi waseChile) nemikhosi yomphakathi ephelele ngokugqoka kwesiko nokuhamba kwe-cueca, umdanso womphakathi. Inani labantu lithuthuka kakhulu entwasahlobo ngayinye njengoba izivakashi zigijimela endaweni yemigubho eminingi enikelwa njengefa laseJalimane elivuse iBeer fest. Ngaphezu kwalokho kunemihlangano eminingi yasemgwaqweni, imijaho yamabhayisikili, nemikhosi yamasiko omdabu.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweChile
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile
[Te-7] I-Visa Yabatshalizimali
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile
Ngemuva konyaka ongu-1 wokuhlala okwesikhashana
Ngemuva kweminyaka engu-5 yokuhlala unomphela.
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseChile
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile
Ibhizinisi / Ukutshalwa Kwezimali
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali eChile
IChile inomnotho wokuncintisana eLatin America. Izwe elizinzile kwezomnotho nakwezombusazwe. Izwe linikeza amathuba amaningi, futhi lithambekele ekukhuleni. IChile inikeza indawo yebhizinisi enamandla kakhulu kubo bonke abatshalizimali bayo.
Ukufuduka komndeni eChile
Abantu abathembele kumfakisicelo kufaka phakathi owakwakhe, izingane nabazali bangafakwa esicelweni.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eChile
Okokuqala kuzodingeka uthole i-visa yesikhashana ezokuvumela ukuthi uhlale futhi usebenze ezweni unyaka owodwa. Ngemuva kwaleso sikhathi usufanelekile ukufaka isicelo se-visa yokuhlala unomphela uma kwenzeka ugcina inani lotshalo-mali ebhizinisini. Kufanele futhi unikeze ubufakazi bokuhlala ezweni okungenani izinsuku eziyi-185 futhi ukhokhe yonke intela. Kufomu lakho lesicelo kufanele ufake nencwadi ezosho ukuthi kungani ufuna ukuba ngumhlali waseChile unomphela. Imvume yokuhlala unomphela iyavuselelwa futhi isebenza iminyaka emi-5. Ungafaka isicelo sokuba yisakhamuzi ngemuva kokuphela kwaleso sikhathi. Ulwazi lwesiko nomlando wezwe, nolwazi lolimi luyimpoqo. Ukuze uthole ukuhlala unomphela kuzofanela uhlale kuleli lizwe izinyanga eziyisithupha ubuncane. Lezo zinyanga eziyi-6 akufanele zilandelane. Kodwa-ke, qaphela ukuthi uma uhlala ngaphandle kweChile izinsuku ezingaphezu kwezingu-6, ngeke usakwazi ukuthola ukuhlala unomphela. Akunasidingo sokuba khona ngokomzimba ezweni, uzodingeka nje ukuthi ungene ezweni okungenani usuku olulodwa phakathi nonyaka. Uzokwazi ukweqa imfuneko, uma uzoba nefomu nommeli waseChile phesheya, okufanele kubhalwe ezinsukwini ezingama-180 ngaphambi kosuku lokuphelelwa yisikhathi kwefomu elidala. Kulokhu ungakhulisa isikhathi sokungabikho ezweni iminyaka emi-60 ilandelana. Qaphela ukuthi izaba zakho kuleli cala kufanele zifakazelwe.
Izidingo zezezimali zeChile
Labo abafuna ukuqala ibhizinisi eChile kufanele batshale ubuncane be- $ 60 000 USD. Ukutshalwa kwezimali kufanele kwenziwe zingakapheli izinyanga ezintathu ukuvunyelwa ukuhlala okwesikhashana. Uyacelwa ukuthi uqale inkampani yakho esanda kusungulwa ukuze uthole ukuhlala unomphela. Inkampani yakho izobhekwa futhi igadwe nguhulumeni, ngoba kufanele ihlangabezane nenqubo ethile. Kukhona amathuba okuba nezindleko ezingeziwe ngenxa yale nqubo yokufaka isicelo.
Ukusekelwa kwamakhasimende kokuhlala ngokutshala imali eChile
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala Ngabenzeli Bokutshalwa Kwezimali baseChile futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli eChile inikeza amaklayenti nemindeni yawo eChile ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eChile, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eChile namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eChile noma i-Golden Visa yaseChile noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eChile noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshala izindlu nomhlaba avela eChile, nokunikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani I-Chile noma i-offshore, izinsiza zabantu eChile nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwa ebusheni naseChile kanye nokuhlala okwesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseChile:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kweChile, ngokungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika ezaseChile, abambi bezimali abafudukela kwamanye amazwe abangabizi kakhulu eChile, abahlali abambi eqolo ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eChile, indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseChile kanye nenkampani yabeluleki bezokufika engabizi kakhulu eChile
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka eChile kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eChile kuya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka eChile kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili esuka eChile iya emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa eChile kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eChile.
Izinhlelo ze-Golden visa eChile emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali kusuka eChile kuya emazweni we-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela eChile ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe kusuka eChile kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweChile ngeReal Estate
Sinikeza ukwesekwa kotshalomali bezindlu eChile ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwemali eChile, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali eChile. Sinoxhumano nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa eChile abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eChile, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezihamba phambili zokuhlala kwempahla eChile ngotshalomali kwempahla yangempela eChile.
Udinga ukwazi - Indawo yokuhlala yaseChile ngotshalomali
Ukuhlala kabusha ngummeli wezokutshalwa kwezimali eChile kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eChile. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshala imali eChile zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka eChile noma eChile, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kumakhasimende ukuze athole imvume yokuhlala eChile kanye nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala waseChile, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eChile sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eChile. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eChile kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Uma imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eChile isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseChile.
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eChile kubantu ngabanye noma amabhizinisi ashiwo ngezansi eChile:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eChile azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezikhali nezinhlamvu ezivela noma eziya eChile.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali eChile ahlinzekelwa ukubhekwa ngobuchwepheshe eChile noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya eChile.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweChile ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eChile.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali eChile akukhona okwabantu abasebenza ngokusebenza kofuzo eChile.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eChile akuyona eyamabhizinisi asebenza ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eChile.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweChile akutholakali kubantu baseChile abasebenza ngokuhweba, ukugcina eChile, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali eChile akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo eChile akuzona ezenkolo namahlelo abo ezinsiza eChile.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Chile ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zocansi eChile.
Ukuhlala kwethu abameli eChile awasekeli ukusebenzelana kwebhizinisi ngokuthengwa kwezidakamizwa eChile.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha ukuqapha okunengqondo ukucacisa amaphepha e-AML kumakhasimende aseChile naseKYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa kuziphathimandla zaseChile ukuvunywa kwesicelo se Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngosizo lokutshala imali eChile ngotshalomali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlela izindlu eChile.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zaseChile, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali eChile inikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle eChile.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuHlala okuMbili eChile esekela amaklayenti nemindeni yawo eChile.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali baseChile nabasebenzeli bezomthetho baseChile abanikeza ukwesekwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu nabasebenzeli benqubo yokuphatha yaseChile abazinikele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eChile nangemva kokuvunywa, ilungu leqembu lethu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu eChile
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi iChile, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eChile kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eChile
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali eChile sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eChile, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwaseChile nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa eChile
Inqubo Yezimvume Zokusebenza eChile
Indawo yokuhlala okwesikhashana eChile
Indawo yokuhlala unomphela eChile
Ama-Embasi nama-Consulates aseChile
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka eChile ngezidingo ezisheshayo noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho eChile ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weChile, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini eChile ngamanani akhokhelekayo.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eChile, sinikezela ngezinsizakalo zebhizinisi, ze-IT neze-HR naseChile, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseChile abasenza isitolo esisodwa seChile namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu, kanye nosomabhizinisi baseChile ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eChile ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha eChile nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani eChile noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eChile zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eChile
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eChile uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange eChile ne-akhawunti yasebhange yenkampani eChile, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha eChile
Uma kunjalo udinga ukubonisana eChile, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eChile njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eChile noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze IChile uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elikhona eChile ukuqala ngokushesha eChile.
Izinsizakalo ze-HR eChile
Our inkampani yezabasebenzi eChile ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga thumela izikhala eChile free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo zaseChile
Izinhlelo zebhizinisi zeChile kanye izinombolo ezibonakalayo zeChile Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eChile
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eChile nase okuningi.
Ikheli lehhovisi elibonakalayo eChile
Setha ibhizinisi eChile
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eChile, isethaphu ibhizinisi ku Chile.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eChile
Ukwakhiwa Kwewebhu eChile
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eChile
Ukuthuthukiswa kwewebhu eChile
Ukuthuthukiswa kweBlockchain eChile
Ukuthuthukiswa Kohlelo lokusebenza eChile
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eChile
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eChile
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo ze-Investment eChile futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, eChile, singabaholi, inkampani yethu yabameli eChile inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseChile, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende eChile nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseChile nemindeni yabo. I-Residency yethu yithimba lokutshala imali laseChile linikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eChile, lapho imvume yakho yokuhlala eChile ivunyelwe.
Amandla wommeli waseChile ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eChile. Uma useChile noma uhlela ukuvakashela eChile, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani eChile ukude, amandla akho abameli kufanele abe semthethweni ngokufanele ukuthi asetshenziswe endaweni yaseChile. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma ligunyazwe ngokomthetho yihhovisi likazwelonke laseChile.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eChile
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala yaseChile ngokutshala imali kwezomnotho waseChile ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eChile, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali eChile kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eChile, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eChile, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eChile kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eChile, abasebenza njengendawo yokuhlala engcono ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eChile, kanye namafemu amahle abonisana nabokufika eChile.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eChile | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eChile | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eChile | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali eChile | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali eChile
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngotshalomali eChile?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eChile, kungachazwa njengokuthola ubuzwe baseChile ngokutshala imali emnothweni waseChile ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, izibopho zikahulumeni, njll eChile. Faka isicelo sokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eChile, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eChile olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshalwa kwezimali eChile, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eChile, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eChile nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali baseChile, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezimali eChile, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika eChile.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi eChile | Abaceli abafinyelelekayo bokufika eChile | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eChile | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eChile | Izeluleko ezingabatshali zimali ezifinyelelekayo zaseChile | Amafemu omthetho wezokufika angabizi eChile
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eChile?
Iphasiphothi yesibili eChile, ingachazwa njengokuthola ubuzwe obusemthethweni beChile ngokutshala imali kwezomnotho waseChile ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu, izindlu, amabhizinisi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi lesibili eliya eChile, uhlelo lwesibili lwepasipoti lwaseChile olusekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili eChile, ngabameli bethu besibili abahamba phambili bephasiphothi eChile, abameli besibili abahamba phambili bepasipoti eChile nabeluleki besibili abahamba phambili bePasipoti eChile, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili eChile, kanye namafemu abeluleki bokufika angcono eChile.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zaseChile | Abenzeli besibili bepasipoti eChile | Abameli bepasipoti besibili eChile | Abameli bepasipoti besibili eChile | Abaluleki besibili bepasipoti baseChile
Iyini incazelo ye-visa yegolide eChile?
I-visa egolide eChile, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala eChile ngokutshalwa kwezimali emnothweni waseChile ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eChile, uhlelo lwe-visa legolide lweChile olusekelwa yi Izinsizakalo ze-visa zegolide zaseChile, ngokusebenzisa abameli bethu abahamba phambili be-visa baseChile, abameli bama-visa begolide abahamba phambili eChile kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa baseChile, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eChile, kanye namafemu abonisana kahle nabokufika eChile.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zeChile | Abameli bama-visa egolide eChile | Abameli begolden visa eChile | Abameli bama-visa egolide eChile | Ababonisi be-visa begolide baseChile
Yiluphi utshalomali oluncane lokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshalwa kwezimali eChile yi-USD 2,500,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa okungokomthetho kweChile kweZokuhlala ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eChile kanye nama-ejenti aseChile ahlinzeka ngokusekelwa kwabahlali ngokutshala imali eChile.
Ingabe ukuhlala ngokutshala imali eChile kuyabiza?
Izindleko zokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile kanye nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eChile kungokwabantu abanenani eliphakeme, sibiza imali yokubonisana kuphela ye-Residency by Investment to Chile, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency ngezixazululo ze-Investment.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eChile noma nge-visa yabatshalizimali eChile?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali eChile kusuka e-Asia, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kusuka e-Afrika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kusuka eYurophu, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kusuka eNingizimu Melika Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kusuka eMalaysia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile kusuka eBangladesh, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile kusuka e-Indonesia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eChile kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eChile kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali eChile kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali eChile
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eChile
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Chile
ICámara de Comercio de Santiago
UPablo Neruda - Umlando
Ipaki Yesizwe YaseRapa Nui
UGobierno de Chile-Uhulumeni waseChile.
UNeftalí Ricardo Reyes Basoalto
Quarter yomlando wedolobha laseSeaport laseValparaíso
Ilabhulali Kazwelonke YaseChile
Ukubukwa Kwamalungelo Abantu: EChile
I-Instituto Nacional de Estadísticas
I-Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas
I- Economist.com | Izwe Izwe: Izwe laseChile
I-Chamber of Depounts of eChile-Iqembu Leziphathamandla ZaseChile
Inxusa laseChile e-US
KaMasipala de Santiago
Ikhathalogi Yemininingwane Yomthetho Yomhlaba Wonke: IChile
IBolsa de Comercio de Santiago
I-World Factbook - eChile
UDiario Oficial de la República waseChile I-Santiago, eChile
Umtapo Wezincwadi Wezomthetho weCongress: eChile
Izikhundla Zezikhulu ZaseChile Abroad
I-Sewell Mining Town
Amnesty International: EChile
Ministry of Foreign Affairs- UMnyango Wezangaphandle waseChile.
I-Senado de la República de Chile-I-Senate yeRiphabhlikhi yaseChile iyindlu ephezulu yeCic bicameral Congress
Isisekelo Samagugu: EChile
Isiqondisi sebhizinisi laseChile
I-Chile - i-LANIC
Iphrofayili Yezwe le-BBC: EChile
I-Presidencia de la República de Chile-Ihhovisi likaMongameli waseChile.
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka WaseChile , onesibopho sokwakha izinqubomgomo zokusheshisa ukuthuthela kwelinye izwe eChile